Emmanuel macron တွေ့ဆုံ Mark Zuckerberg ဟာ, Facebook ရဲ့သူဌေး, - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အပေးအယူ • တရားမျှတမှုကို • TECH & Telecom Emmanuel macron တွေ့ဆုံ "Mark Zuckerberg ဟာ, Facebook ရဲ့သူဌေး,
Facebook က၏ CEO ဖြစ်သူ Mark Zuckerberg ဟာ, အွန်လိုင်းအမုန်းပစ္စည်းများ၏စည်းမျဉ်းကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက် Elysees မှာ Emmanuel macron သောကြာနေ့ 10 မေလတွင်လက်ခံရရှိသောဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင်လူနှစ်ယောက်အကြားအမြင်များ၏ convergence အတည်ပြုသင့်တယ်။ အဆိုပါ 30 မတ်လ, Zuckerberg ဟာလူသိရှင်ကြားတစ်ကစားရန်အစိုးရများအပေါ်ကိုခေါ် " ပိုပြီးတက်ကြွအခန်းကဏ္ဍ "အင်တာနက်ကိုထိန်းညှိခြင်းနှင့်တိကျစွာရန်, ပြင်သစ်ပြင်သစ်ဒါပေမယ့်လည်းဥရောပအဆင့်တွင်အသစ်ဥပဒေပြဌာန်းမိတ်ဆက်ပေးလို၏။
ဤသည် Mark Zuckerberg ဟာ Emmanuel macron အားဖြင့်လက်ခံရရှိကြောင်းတစ်နှစ်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအစည်းအဝေးပြီးနောက် Facebook ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သည့်ပလက်ဖောင်းပြောက်ဘယ်လိုနားလည်ရန်ပြင်သစ်အရာရှိတစ်ဦးမစ်ရှင်မှ၎င်း၏တံခါးများဖွင့်လှစ်ရန်သဘောတူနှင့်သုံးစွဲသူများအားဖြင့် posted အကြောင်းအရာများကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။ Facebook က၏ဦးခေါင်း၏ခရီးစဉ်အတွေ့အကြုံ၏စတော့ရှယ်ယာယူဖို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။
ပြင်သစ်အသစ်သောစည်းမျဉ်းများချမှတ်ရန်မကြာမီရည်ရွယ်ထားကြောင့် Elysees အဆိုအရမစ်ရှင်၏ကောက်ချက်ပင်, ဥပဒေပြုလာအောင်နှိုးဆွပေလိမ့်မည်။ အပေါ်အထူးသဖြင့်တစ်ဦးဥပဒေကြမ်း ရွံမုန်းဖွယ်အကြောင်းအရာ။ စာသားကိုဖယ်ရှားသို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့တရားမဝင်အကြောင်းအရာ 24 နာရီအတွင်းဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ငွေရင်ဆိုင်ရဖို့လူမှုရေးကွန်ရက်များလိုအပ်ပေလိမ့်မည်။ အဆိုပါပြင်သစ်ကိုယ်တော်တိုင်နိုင်ငံတကာတွင်အဆိုပါ fer-de-လှံအင်တာနက်ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဖြစ်လာဖို့မြင်နေရတယ်။ တိုင်းပြည်, သြဂုတ်လနှောင်းပိုင်း G7 Biarritz မှတဆင့်အွန်လိုင်းအမုန်းအပေါ်တစ်ဦးပဋိညာဉ်စာတမ်းတွန်းအားပေးရန်လိုသည်။
ယခင်ကအမှုဆောင်အရာရှိများနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြီးအကဲတွေကောင်းမွန်သောသည် Tech မှများ၏ထိပ်သီးအစည်းအဝေး 2e ထုတ်ဝေမှာပဲရစ်လာမယ့်သီတင်းပတ်အတွင်းဖြည့်ဆည်းပါလိမ့်မယ်။ ထိုအ Emmanuel macron Jacinda Adernနယူးဇီလန်ဝန်ကြီးချုပ်ခေါ်ဆိုမှုခကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။ သဘောတူညီချက်အင်တာနက်အပေါ်အကြမ်းဖက်သမားများနှင့်အကြမ်းဖက်အစွန်းရောက်အကြောင်းအရာဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲတိုးတက်လာဖို့မျှော်မှန်းထားသည်။
■ တစ်ဦးကအငြိုးတကြီးနဲ့ဖိုရမ်တစ်ခုက Facebook အတွက်ပူးတွဲတည်ထောင်သူ New York Times ကို
San Francisco မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းထောက်ထံမှအဲရစ် Salve
2004 ခုနှစ်တွင်ဟားဗတ်အိပ်ဆောင်အတွက်, Chris Hughes က Mark Zuckerberg ဟာအတူ Facebook ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ တဆယ်ငါးနှစ်အကြာတွင်မှာရှည်လျားသော rostrum အတွက်နှိုးစက်အသံ New York Times ကို. ဝက်ဘီလီယံ 2012 အတွက်ကုမ္ပဏီကသူ၏ရှယ်ယာများကိုရောင်းသော Chris Hughes ကသူ 2012 နှင့် 2014 ရွေးနှုတ်တော်မူသည့်လဝိသန်, Instagram ကိုနှင့် WhatsApp ကို applications များခေါ်ဆိုသောအရာကိုခွဲခြားရန်အမေရိကန်အာဏာပိုင်များအပေါ်တောင်းဆိုလိုက်သည်။ လူပေါင်းများစွာကအသုံးပြုဤသုံးပါးပလက်ဖောင်းလူတစ်ဦးကထိန်းချုပ်ထားနေကြတယ်, သူ subscriber များအားမြင်သောဆုံးဖြတ်ရသောဆိုပါတယ်။ စီးပွားရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီသူ့မြင်ကွင်းထဲမှာတစ်ဦးကအန္တရာယ်ရှိလက်ဝါးကြီးအုပ်, Mark Zuckerberg ဟာ "သူ၏မိတ်ဆွေဟောင်းရေးသားခဲ့သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဆိုပါကလစ်၏မျက်နှာသာအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုယဇျပူဇျော "။
Chris Hughes ကသူ့အရှုပ်တော်ပုံမတိုင်မီနောက်ဆုံးအိမ်ပြန် Zuckerberg ဟာကိုမွငျလြှငျပြောပါတယ် ကင်းဘရစ် Analityca။ " မာကုနေတုန်းပဲရေတိုအတွက်ကျောင်းသားတစ်ဦးပါတီမှာအိမ်သာတစ်ခုတန်းစီ၌သူ၏အနာဂတ်ဇနီးနှင့်အတူမေတ္တာ၌လဲကျတဲ့သူဟောင်းမွေ့ရာဟားဗတ်အပေါ်အိပ်ပျော်နေသော, သူ့စာမေးပွဲထပ်မံစိစစ်တည်းဖြတ်အစား procrastinant ငါသိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည် ဒါကြောင့် "လူ့ဖြစ်ပါသည် သူက "ဟုပြောသည် ဒါပေမယ့်အတိအကျမိမိအလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ထိန်းချုပ်မှုထဲကပြဿနာပါဝါစေသည်နေသည် "။ သို့သျောလညျး " ၎င်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုChris Hughes ကအီး Saysအစိုးရအတွက်မည်သူမဆို၏ထက် သာ. ကြီးမြတ် st "။ " ဤသည်အစိုးရ၏တာဝန်ခံမာကုယူရမယ်Facebook က၏တည်ထောင်သူစာရေး, နှင့် "တိုတောင်းတဲ့အချိန်အတွက်ကြောင့်ဖျက်သိမ်း.
အဆိုပါဖိုရမ်အထူးသဖြင့်ကကြိုဆိုခဲ့သည် အဲလစ်ဇဘက် Warrenသမ္မတများအတွက်ဒီမိုကရက်တစ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေတစ်ခုမှာ။
အာဖရိကနိုင်ငံများအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဟာ GB အထိမိုဘိုင်းဘရော့ဒ်ဘန်းကုန်ကျ